समाचार - कसरी सबै भन्दा राम्रो जग तरल पदार्थ छनौट गर्न?
हाम्रो सब भन्दा बेच्ने तरल फाउण्डेशन अब shad० शेडमा! लाइटवेट, तेल-रहित फार्मुलाले एक सुन्दर सेमी-म्याट फिनिशको लागि प्राकृतिक रूपमा छालामा मिश्रण गर्दछ जुन दिनभर रहन्छ। तरल सूत्रले उज्ज्वल छालाको लागि असमान छाला बनावट र टोनहरू पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। सबै छाला-प्रकारहरूको लागि उत्तम र यो हल्का फार्मूलाले छालाको टोनलाई पनि मद्दत पुर्‍याउन कभरेज प्रदान गर्दछ र तपाईंको छाला सफा गर्न मद्दत गर्ने कार्य गर्दा एक्ने रातोपन कम गर्दछ।
हे, तेल छाला सुन्दरहरू! राम्रो समाचारको साथ सुरु गरौं: अतिरिक्त निर्मित लुब्रिकेशनले ती चिल्लो छालाले आशिष्‌ पाउँदछ जुन झिम्काउने झुकावमा कम हुन्छ र प्राय: जसो बढी प्राकृतिक सूर्यको सुरक्षा हुन्छ। प्लस — शीतलता भित्र छ! त्यसो भए, हो! त्यहाँ छ।
तर, फ्लिप पक्षमा, तेल छालाको साथले थाहा पाउँदछ कि, तपाईले आफ्ना उत्पादनहरू बुद्धिमानीपूर्वक छनौट नगरेसम्म, स्लाइड वास्तविक हो, र मेकअपलाई ताजा र पग्लन-मुक्त राख्न संघर्ष गर्नुपर्दछ। फाउण्डेशन विशेष गरी प्याच हुने र स्लाइडिंग हुने प्रवण हुन्छ that र त्यो बेस लेयरको साथ तपाईंको ध्यानपूर्वक लागू गरिएको सबै कुरा जान्छ। निराश!
त्यसकारण यो अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईसँग तेल छाला छ भने तपाइँको छालाको प्रकारको लागी डिजाइन गरीएको उत्पादनहरु छनौट गर्न। यदि तपाईंले द शाइनसँग संघर्ष गर्नुभयो तर कहिले यसमा उत्पादनको प्रयास गरिएन, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। यो कुल खेल परिवर्तक हो।
तेल छालामा एक मेकअप आधार लागू गर्नका लागि यहाँ तीन चरण चरणहरू छन्:
चरण # १: तेल छालाको लागि प्राइमर लागू गर्नुहोस्
आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, एक परिष्कृत फाउन्डर प्राइमर तेल छालाको लागि उत्तम उत्पाद हो! यो तपाईको अनुहारको लागि केवल एक अतिरिक्त तहको शक्ति हो! फाउंडेशन अन्तर्गत प्रयोग गरीएको, नन-कमडोजेनिक बेबी स्किन इन्स्यान्ट पोयर ईरेजर र फेस स्टूडियो मास्टर प्राइमर मेकअप ब्लर + पोयर मिनिमाइजले छिद्रलाई अदृश्य बनाउँदछ, चमकलाई काट्छ र मेकअपलाई लामो समयसम्म मद्दत गर्दछ।
चरण # २: तेल छालाको लागी लागू गर्नुहोस्
हामी तेल छाला, Jinfuya म्याट + Pore- कम फाउंडेशन को लागी हाम्रो उत्तम फाउन्डर सिफारिस गर्दछौं। यो पुरस्कार-विजेता, मध्यम कभरेज फाउन्डेशनमा एक गोप्य हतियार छ जुन स्वाभाविक रूपमा तेल-अवशोषित गर्ने, माटो मिल्दो हुने! यो पनि सुपर प्रभाव माइक्रो-पाउडर संग प्याक छ जो चमक र कुनै चाक्यता वा अवशेष बिना pores को धमिलो नियंत्रण। र यो केवल छाला जस्तै देखिन्छ - धेरै प्राकृतिक र राम्रो।
तपाईं हाम्रो Jinfuya शाइन-फ्रि + ब्यालेन्स स्टिक फाउन्डेशन पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। स्टिक फाउन्डेशन गाह्रो छ यदि तपाईं तेल छाला पाउनु भएको छ — सूत्र हो, प्रकृति द्वारा, सुपर क्रीमी। तर यो लाइटवेट स्टिक फाउन्डेशनको भित्र यसको भित्र एक विशेष एन्टी-शाइन पाउडर कोर छ जुन द्रुत रूपमा सबै स्वाइपले अधिक तेल घुल्छ!
हाम्रो Jinfuya आहार फाइंडर उपकरणको साथ Jinfuya फाउंडेशनको तपाईंको छायाँ फेला पार्नुहोस्।
चरण #:: तेल छालाको लागी सेट अप्टिOW्ग पाउडर
यदि तपाईं तेल छाला पाउनु भएको छ भने तपाईं सायद पहिल्यै नै आफ्नो सौन्दर्य आर्सेनलमा पाउडर पाउनुहुन्छ — यो अन्तिम इन्स्ट्यान्ट चमक फिक्स हो। तर! सबै समान बनाइएको हुँदैन।
थिचेको पाउडर — र केहि लूज पाउडरहरू पनि प्राय: तेलले भरिन्छ। जबकि तिनीहरूले चिकनाई को लागी एक द्रुत फिक्स प्रदान गर्न सक्छ, तिनीहरू वास्तवमा तपाईंको मेकअप मल्दाडाउनमा योगदान गर्न सक्दछन्। हाम्रो छनौट? मेकअपको क्रममा धुवाँ र दिनभरि धुलो रहित तेल नियन्त्रण लुज पाउडरले छालालाई ताजा, सफा, र घण्टासम्म चमकमुक्त राख्छ र नामले देखाउँदछ, १००% तेल मुक्त।